ဆွီဒင်ရှိအမျိုးသမီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားလိင်နှင့်သန္ဓေတားဆေးဆိုင်ရာအပြုအမူ - ၂၅ နှစ်တာကာလအတွင်းထပ်ခါတလဲလဲစစ်တမ်းများ (၂၀၁၅) - Your Brain On Porn
တစ်ဦး 25 နှစ်ကာလ (2015) ကျော်ထပ်ခါတလဲလဲစစ်တမ်းများ - ဆွီဒင်အမျိုးသမီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်တားဆေးအပြုအမူ
comments: အမျိုးသမီး၏ 70% ညစ်ညမ်းသုံးပြီး, 48% ကသူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထိခိုက်ဟုပြောသည်။
Acta Obstet Gynecol Scand. 2015 ဇန်နဝါရီ 25 ။ Doi: 10.1111 / aogs.12565 ။
Stenhammar C1, Ehrsson YT, Åkerud H ကို, Larsson M က, Tydén T က.
နှိုင်းယှဉ်, ထပ်ခါတလဲလဲ Cross-Section စစ်တမ်းများ, 1989 စတင်ခဲ့သည်ပဉ္စမနှစ်တွင်ထပ်ခါတလဲလဲ။
အမျိုးသမီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ (= = 359) ။
၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင်ပထမလိင်ဆက်ဆံမှုသည် ၁၇.၆ နှစ်နှင့် ၂၀၁၄ တွင် ၁၆.၇ နှစ်ဖြစ်သည်။ တစ်သက်တာလိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ၄.၀ နှင့် ၁၂.၁ ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၁၂ လအတွင်းလိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အရေအတွက်သည် ၂၀၁၄ တွင် ၁.၀ နှင့် ၂.၈ ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးမိတ်ဖက်နှင့်ပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံစဉ်က ၄၉% မှ ၄၁% သို့လျော့နည်းသွားသည် (၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် n = 1989 vs. ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် n = 17.6: p <16.7)၊ စအိုဖြင့်လိင်ဆက်ဆံမှုအတွေ့အကြုံသည် ၃၉% မှ ၄၆% သို့တိုးလာခဲ့သည် (n = 2014 in) 4.0 vs. n = 12.1 2014 ခုနှစ်တွင်: p = 12) နှင့် 1.0% (2.8 ခုနှစ်တွင် = = 2014) အမြဲစအိုလိင်စဉ်အတွင်းကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ စုစုပေါင်း ၇၀% (n = ၂၅၁) သည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခဲ့ပြီး ၄၈% (n = 70) သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟုထင်မြင်ကြသည်။ ရှစ်ဆယ်ကိုးရာခိုင်နှုန်း (= = ၂၉၁) သည်ကလေးနှစ်ယောက်မှသုံး ဦး ကိုလိုချင်ခဲ့ပြီး ၉% သည်အနာဂတ်အတွက်ဥများကိုအေးခဲစေရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။ ကလေးများကြီးထွားလာမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အသိပညာဗဟုသုတမှာအမျိုးမျိုးကွဲပြားသည်။
လွန်ခဲ့သော ၂၅ နှစ်အတွင်းအမျိုးသမီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသည်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာပြီးအပြုအမူသည်ယနေ့ ပို၍ အန္တရာယ်များပုံရသည်။ ၎င်းသည်အနာဂတ်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သဖြင့်အမျိုးသမီးများအားကွန်ဒုံးကိုပုံမှန်နှင့်မှန်ကန်စွာအသုံးပြုခြင်းနှင့်မြေသြဇာကောင်းသောပြတင်းပေါက်၏ကန့်သတ်ချက်များအကြောင်းအသိပေးရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
© 2015 စာရေးဆရာများ။ Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica သည် John Wiley & Sons Ltd မှသားဖွားမီးယပ်ဆိုင်ရာနှင့်မီးယပ်သားဖွားအသင်းများ၏အသင်းချုပ် (NFOG) မှထုတ်ဝေသည်။
စျေးကြီးသော; အမျိုးသမီး; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ; လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ; လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်; အန္တရာယ်မကင်းလိင်